တခါမျှမလိုက်သေးသောလမ်း | Shwe Canaan TV
00Truth Monday, 28 December 2015
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ. တစ်နှစ်ပါတ်လုံးကွယ်ကာစောင့်မတော်မူ၍ နှစ်သစ်ရောက်အောင် ပို့ဆောင်တော်မူသော၊ အရှင်တို့၏သခင်၊ ဘုရားရှင်၏ ဂရုဏာတော်အ...
တစ်နှစ်ပါတ်လုံးကွယ်ကာစောင့်မတော်မူ၍ နှစ်သစ်ရောက်အောင် ပို့ဆောင်တော်မူသော၊ အရှင်တို့၏သခင်၊ ဘုရားရှင်၏ ဂရုဏာတော်အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့် ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်း ရှိစေသတည်း။
နှစ်ဟောင်းကုန်၍ နှစ်သစ်ထဲရောက်လာပြီဆိုလျှင်၊ လူတိုင်း၏စိတ်ထဲမှာ၊ တစ်မျိုး စီခံစားချက်ရှိကြပါသည်။ လွမ်းသလိုလို၊ ဆွေးသလိုလို၊ တစ်စုံတစ်ခုခုလိုနေသလိုခံစား ချက်ရှိကြပါသည်။ တချို့မှာမူ ၂၀၁၅ - ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်ရောက်ပြီဆိုလျှင် ပျော်ရွှင်မြူး တူးကခုန်လျှက်၊ အော်ဟစ်နေသူများလည်းရှိလိမ့်မည်။ တချို့မှာမူ၊ နှစ်သစ်ကိုစောင့် ကြိုဆိုရင်းနှစ်ဟောင်း
တချို့ခရစ်ယာန်ဘာသာ၀င်တို့မှာမူ၊ ဘုရားကျောင်းထဲမှာစည်းေ၀းလျှက်၊ နောက် ဆုံးပွဲတော်မင်္ဂလာ၊ ညစာစားပွဲကိုကျင်းပလျှက်ရှိပါသည်။ ထိုညမှာအပြစ်ဟောင်းများကို နောင်တရလျှက်၊ မျက်ရည်ဖြင့်အပြစ်၀န်ချတောင်းပန်နေသည်ကိုတွေ့ရပေမည်။
သို့သော်၀မ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာ၊ ဇန်နဝါရီလ(၄)ရက်မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးနေ့ ရောက်ပြီဆိုလျှင်၊ခါတိုင်းသောက်နေကျအရက်၊ ခါတိုင်းသောက်နေကျဆေးလိပ်၊ ခါတိုင်းစားနေကျကွမ်းယာများကို နှစ်သစ်မှာတဖန် ပြန်လည်စားသောက်ကြသည် ကိုတွေ့ရပေမည်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောလျှင်၊ ထိုသူတို့၏အသက်တာသည်နှစ်ဟောင်း မှနှစ်သစ်သို့ အလီလီကူးပြောင်းခဲ့သော်လည်း ခွေးမြီးကောက်ကျီတောင့်စွပ်သကဲ့သို့၊ နှစ်ကူးတုန််းသာအသစ်ဖြစ်သော်လည်း၊ မကြာမှီခါတိုင်းလိုပဲ၊ သောက်မြဲသောက်၊ စားမြဲ စားနေကြလေသည်။
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ. ၂၀၁၅ -ခုနှစ်မည်သို့ဖြစ်ခဲ့သည်မဆို၊ နှစ်ဟောင်းထဲကအတွေ့အကြုံ အဖြစ်အပျက်များကိုပြန်လည်စားမြုံ့ပြန်နေဘို့ ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိပါ။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုကငါပြုသောအမှုတစ်ခုဟူမူကားနောက်ကျသောအရာတို့ကိုမမှတ်ပဲ၊ရှေ့၌ရှိသော အရာတို့ကိုကမ်းလှမ်း၍ ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်အရှေ့အရပ်မှခေါ်တော်မူခြင်းနှင့် ဆိုင်သောဆုကိုရခြင်းငှါပန်းတုံး တိုင်သို့ငါသည်လိုက်ပြေး၏(ဖိလိပိ္ပ၊ ၃း၁၃-၁၄)။ ထို့ကြောင့်နှစ်ဟောင်းမှာဆုံးရှုံးခဲ့သောငွေကြေး မ်ား၊ အခြားသူများကမိမိအပေါ် မတရားအနိုင်ကျင့်ခြင်းများ၊ သေဆုံးခဲ့သောမိသားစုများ လူတဦးတယောက်အပေါ်မှာ၊ မုန်းတီးခြင်း၊ ခါးသီးခြင်းများကိုမေ့ပစ်ဖို့အလိုတော်ရှိသည် အတိုင်းမေ့ပစ်ကြပါစို့။ ဖြစ်ပြီးတာတွေဖြစ်ပါစေ၊ဘုရားအခွင့်မရှိပဲ၊ဘယ်အရာမှာမှ၊မိမိတို့အပေါ်မှာ၊ မရောက်လာနိုင်ပါ။ ဖြစ်သမျှမိမိတို့အကျိုးအတွက်သာ၊ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးနေသည်ဟု မှတ်ယူ ကြပါစို့။(ရောမ ၈း၂၈)
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊.. ရှင်ယာကုပ်က၊ ကျွနု်ပ်တို့အားသတိပေးသောစကား ကိုမှတ်သားစေလိုပါသည်။ ယနေ့ နက်ဖြန်ဤမည်သောမြို့သို့သွားကြကုန်အံ့ဟုဆိုတတ် သောသူတို့၊ နားထောင်ကြလော့။ နက်ဖြန်နေ့၌အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုမသိကြ။သင်တို့အသက်သည်အဘယ်သို့သောအရာဖြစ်သနည်း၊ ခဏထင်ရှားပြီးမှကွယ်ပျောက်တတ်သော အခိုးငွေ့ဖြစ်၏(ယာကုပ် ၄း၁၃-၁၄)။ နက်ဖြန်နေ့ကိုအမှီပြု၍မဝါကြွားနှင့်။တရက်အတွင်း တွင်အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမသိနိုင်(သုတ္တံ ၂၇း၁)။
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ..၊နှစ်သစ်မှာမိမိအသက်တာကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ပါ။လူ၏အ ကြံအစည်၊လူ၏စီမံကိန်း၊အတွေးအခေါ်လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဘုရားအခွင့်မရှိပါက အချည်းအနှီးသက်သက်သာဖြစ်ကြောင်းနားလည်စေချင်ပါသည်။ ယောဘကဤသို့ဆု တောင်းပါသည်။ ငါ့အသက်သည်လေသက်သက်ဖြစ်ကြောင်းကိုအောက်မေ့တော်မူပါ။ (ယောဘ၇း၁၇) ဆာလံဆရာဒါ၀ိဒ်ကဤသို့စပ်ဆိုပါသည် ကျွနု်ပ်အသက်တာကို တမိုက်မျှသာ ခန့်ထားတော်မူပြီ။ ကျွနု်ပ် အရွယ်သည်ရှေ့တော်၌ဘာမျှမဟုတ်သကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏ အကယ်စင်စစ် လူမည်သည်ကား လူ၏ အထွဌ်သို့ရောက်သော်လည်း၊ အနတ္တသက်သက်ဖြစ်ပါ၏(ဆာလံ၃၉း၅) ဘုရားသခင်၏လူမောရှေက အကျွနု်ပ်၏နေ့ရက်ကာလသည်မီးခိုးကဲ့သို့ကုန်တတ်ပါ၏။
(ဆာလံ ၁၀၂း၂) ။မှန်ပါ၏ချစ်သောမိတ်ဆွေမိမိပါးစပ်မှရှုထုတ်လိုက်သောမီးခိုးကိုကြည့်ပါ။ မကြာမှီလေထဲမှာပျောက်ကွယ်သွား သည်ကိုတွေ့ရပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်မီးခိုးကဲ့သို့ ဖြစ်သောမိမိအသက်တာမကုန်မှီ၊ အသက်ရှင်သောဘုရားကိုအောက်မေ့သင့်ပါပြီ။ ဆာလံဆရာက လူသည်အငွေ့နှင့်တူပါ၏။လွန်သွားတတ်သောအရိပ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏ (ဆာလံ ၁၄၄း၄)။ မှန်ပါ၏။ ချစ်သောမိတ်ဆွေ မနက်ပိုင်းမှာနေထွက်၍ရှည်လျားသော သစ်ပင်၏ အရိပ်ကိုကြည့်ပါ။ နေမင်းကြီးတိမ်ဖုံး သွားသောအခါအရိပ်များလည်း ပျောက်ကွယ် သွားကြောင်းတွေ့ရပေမည်။ ထို့အတူကျွနု်ပ် တို့၏အသက်၀ိညာဉ်ကိုအစိုးရ၍ချုပ်ထားနိုင်သော သူလူတယောက်မျှမရှိ။သေချိန် ရောက်သော အခါ၊ တန္ခိုးမရွိ။(ဒေသနာ၈း၈)။ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ ဤဆောင်းပါးရေးနေချိန်ပင်လျှင်၊ မြန်မာပြည် မွ ဖုန်းလာ၍အမျိုးသမီးအသက် (၆၀)နှစ် တစ်ဦး၊အမျိူးသားအသက်(၄၅)နှစ်တစ်ဦး၊ဒီဇင် ဘာ(၂၆)ရက်၊ (၂၇)ရက်နေ့တွင်သေ ဆုံးသွားကြောင်းသတင်းများရရှိပါသည်။ ဒီဇင်ဘာ (၂၅)ရက်မှ (၃၁)အကြား၊ ဘယ် နှစ်ယောက်ဤလောကမှထွက်သွားဦးမည်နည်း။နှစ်သစ်ကိုမ၀င်ရပဲအချိန်မရွေး ကျွနု်ပ်တို့ သေနိုင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေ၏အသက်၀ိညာဉ်သည် မိတ် ဆွေ၏လက်၌မရှိပါ။ဘုရားရှင်၏ လက်တော်၌ရှိကြောင်းသတိရအောက်မေ့လျက်၊ အ သက်ရှင်တုန်း၊ သခင်ဘုရားနှစ် သက် တော်မူသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို သင်ကြစို့။(ဧဖက်၅း၁၀)။
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများ၊.. ယခုနှစ်၂၀၁၁ နှစ်သည်၊တစ်ခါမျှမလိုက်သေးသော လမ်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီ(၁)ရက်၊ ဒီဇင်ဘာ(၃၁)ရက်အတွင်းဘာတွေ၊ကြုံတွေ့မည်၊ဘာတွေဖြစ်လာမည်ကို၊ အဘယ်သူမျှခန့်မှန်းကြိုတင်ဟောကိန်း မထုတ်နိုင်ပါ။ မနက်ဖြန်ပင်လျှင်ဘာဖြစ်လာမည်ကိုမပြောနိုင်ပါ။
တခါက က္ကသရေလလူတို့သည်အဲဂုတ္တုပြည်ကျွန်ခံရာမှလွတ်လာပြီးနှစ်ပေါင်း (၄၀)ကြာ၊ တောထဲမှာလှည့်လည်လျှက်နေကြ၏။ ယခုအချိန်မှာ၊ရှိတိ္တမ်မြို့မှပြောင်း၍ယောဒန်မြစ်ကို မကူးမီမြစ်နား တွင်စားခန်းချကြ၏။ သုံးရက်စေ့သောအခါတပ်မှူးတို့သည် တပ်တလျှောက်လုံးသို့သွား၍သင်တို့ ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရား၏ပဠိညာဉ်သေတ္တာကို၄င်းသေတ္တာထမ်းသောယဇ်ပရောဟိတ်လေ၀ိ သားတို့ကို၄င်းမြင်လျှင်သင်တို့သည်နေရာပြောင်း၍လိုက်ရကြမည်။သေတ္တာတော်နှင့်သင်တို့စပ်ကြား အတောင်နှစ်ထောင်ခြား၍ခရီးကွာေ၀းစေရမည်။ လိုက်ရသောလမ်းကိုသိမည်အကြောင်းသေတ္တာတော်အနီးသို့မချဉ်းပဲလိုက်ရကြမည်။ ဤလမ်းသို့သင်တို့သည် တခါမျှမလိုက်ကြသေးဟုလူအပေါင်းတို့ အား မွာထား တော်မူ၏။(ယောရှု ၃း၁-၄)
ပထမအချက်အနေဖြင့်က္ကသရေလလူတို့၏ရှေ့ဆုံးမှာပဠိညာဉ်သေတ္တာသွားသကဲ့သို့လာမည့်နှစ်သစ်မှာ၊ ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ဘုရားသခင်ကိုရှေးဦးစွာတိုင်ပင်ပြီးလုပ်ဆောင်ပါ။ဘာမဆိုမလုပ်မှီ..ဘုရားသခင်အ လိုတော်ရှိ၊မရှိသက်သေအရင်ဆုံးရှာပါ။ အရာရာမွာ ဘုရားကိုဦးထိပ္ထားပါ၊ ဦးစားပေးပါ။ ကိုယ်ကဘုရားရှေ့ကိုမရောက်ပါစေနှင့်။ တခါက အရှင်ယေရှုရှေ့မှာရောက်နေသော ရှင်ပေတရုကို ကိုယ်တော်သည်မျက်နှာတော်ကို လှည့်၍အချင်းရန်သူ(စာတန်)ငါ့နောက်သို့ဆုတ်လော့။သင်သည်ငါတိုက်မိ၍လဲစရာ အကြောင်းဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်၏အရာကိုစိတ်မစွဲလန်း၊လူတို့၏အရာကိုသာစွဲလန်း သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏(မဿဲ ၁၆း၂၃)။ ချစ်စွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ ကျွနုပ်တို့သည်လည်း ရှင်ပေတရုကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ကိုရှေ့မှာထားမည့်အစား(ဝါ)ဘုရားအလိုတော်ကိုဦးစား ပေးမည့်အစား မိမိအလို၊ မိမိဆန္ဒကိုထိပ်ဆုံးမှာထားနေပါသလား။ သို့ဖြစ်လျှင်ကျွနု်ပ်တို့သည်ဘုရားသားဖြစ်လျှက်ဘုရားရန်သူစာတန် ဖက်တော်သားဖြစ်လျှင် ခရစ်တော်ဘုရား အတွက်တိုက်မိ၍လဲစရာခလုတ်ကန်သင်းဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်။
ဒုတိယအချက်..အနနှင့် ယဇ်ပရောဟိတ်နှင့် လေ၀ိသားတို့သည် ပရိတ်သတ်ရှေ့ မှာသွားသကဲ့သို့ ကျွနု်ပ်ဦးဆောင်သူများ၊ဓမ္မဆရာ၊သင်းအုပ်ဆရာ၊ဧဝံဂေလိဆရာ၊သင်း ထောက်လူကြီးများတို့ သည်ဘုရားသခင်၏ သိုးတော်စုကိုထိန်းခြင်းအမှုမှာ၊ အနိုင်ထိန်း ရသောကြောင့်မဟုတ်၊မစင်ကြယ်သောစီးပွားရေးကို တပ်မက်သောကြောင့်မဟုတ်ပဲ၊အလိုလိုစေတနာစိတ်ရှိ၍ ကြည့်ရှုအုပ်ထိန်းကြရမည်။ အသီးသီးအုပ်သောအသင်းတော် တို့ကို အာဏာထား၍အစိုးတရပြုသည်မဟုတ်ပဲ၊ သိုးတော်စုရှေ့မှာ ပုံသက်သေကိုပြ သောသူဖြစ်ရကြမည်။(၁ပေ ၅း၂-၃)ဆိုလိုသည်မှာ အသင်းတော်၌ဦးဆောင်သူသည်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအရာမှာ၄င်း၊ ဆုတောင်းခြင်းအရာမှာ၄င်း၊သက်သေခံဟောပြောခြင်း အရာမှာ၄င်း၊ သည်းခံခြင်း၊နှိမ့်ချခြင်းအရာမှာ၄င်း၊ ယုံကြည်သူအသင်းသားများရှေ့မှာ ပုံသက်သေကောင်းပြသနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ ယုံကြည်သူ၊အသင်းသူ/သားများထက် သာလွန်ရပါမည်။
တတိယအချက်..အနေဖြင့် ယုံကြည်သူ၊အသင်းသားများသည် မိမိကိုအုပ်သော သူတို့၏စကားကိုနားထောင်၍ နှိမ့်ချလျှက်နေရကြမည်။(၁ပေ ၅း၁၇) ဆိုလိုသည်မှာအသင်းသူ/သားများသည်သင်းအုပ်ဆရာ၊ ဓမ္မဆရာများထက်ပညာရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဥစ္စာရှိ သည်ဖြစ်စေ၊ သင်းအုပ်တို့၏စကားကိုနားထောင်ရပါမည်။ ဘယ်ကိစ္စမဆိုဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကိုပိုင်းခြား၍ မသိပါကနှိမ့်ချသောစိတ်နှင့်သင်းအုပ်တို့နှင့်တိုင်ပင်ပြီးဆွေးနွေး ရပါမည်။ ထိုသို့သောစိတ်သဘောဖြင့်အသက်ရှင်ပါက ယခုသွားရမည့်တခါမျှမလိုက် သောနှစ်သစ်လမ်းခရီးမှာလုံခြုံစွာလျှောက်လှမ်းနိုင်လိမ့်မည်။
စတုတၳအချက်..အနေဖြင့်ပဠိညာဉ်သေတ္တာနှင့်ပရိတ်သတ်တို့သည်အတောင်နှစ်ထောင် (ပေပေါင်း၃၀၀၀) အကွာမှလိုက်ရကြမည်။သို့မှသာလျှင်ပဠိညာဉ်သေတ္တာကိုမြင်ပြီးဘုရားလမ်းပြသည့် အတိုင်းလျှောက်လှမ်းတတ် ပေလိမ့်မည်။အကယ်၍ပရိတ်များ ပဠိညာဉ်သေတ္တာနှင့်အနီးကပ်လိုက်ပါကရှေ့ကလူများကာဆီးထားသဖြင့်နောက်ကလူ များမမြင်ပဲ လမ်းမှားပေလိမ့်မည်။
ပဉ္စမအချက်..အနေဖြင့်လာမည့်နှစ်သစ်မှာဘုရားသခင်၏အံ့သြဘွယ်လက်တော် ကိုမြင်နိုင်မည့် အကြောင်းကိုယ်ကိုကိုယ်သန့်ရှင်းစွာအသက်ရှင်ရပါမည်။ ယောရှုကလည်းသင်တို့သည် ကိုယ်ကိုကိုယ်သန့်ရှင်းစေကြလော့၊ အကြောင်းမူကားနက်ဖြန်နေ့၌ထာ၀ရဘုရားသည်အံ့သြဘွယ်အမှုတို့ကို သင်တို့တွင်ပြုတော်မူမည်ဟု လူများတို့အားမှာထားတော်မူ၏။(ယောရှု ၃း၅)
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ..က္ကသရေလလူတို့အနေဖြင့်မကြာမှီယောဒန်မြစ်ကြီးကိုဖြတ် ကူးပြီးခါနန်ပြည်ကို၀င်စားပေတော့မည်။ သို့သော်ထိုအချိန်မှာမြစ်ရေသည်လျှံလျက်ရှိ၏။ လှေဖြင့်ကူး၍မရ။ ပင်လယ်နီကိုဖြတ်ကူးသည်နည်းတူမြစ်ရေကိုနှစ်ခြမ်းကွဲအောင်လုပ် တော့မည်မဟုတ်ပေ။
မောရှေသည်လည်းသေဆုံးခဲ့ပြီ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏အံ့သြ ဘွယ်ရာလက်တော်သာ သူတို့နှင့်အတူမရှိပါက ယောဒန်မြစ်ကြီးကိုဖြတ်ကူး၍ရမည်မ ဟုတ်ပေ။ ဤသို့အံ့သြဘွယ်မြင်ဖို့ အရင်ဦးဆုံးလိုအပ်ချက်မှာ အသက်တာသန့်ရှင်းဘို့ ဖြစ်ပါ၏။ သန့်ရှင်းခြင်းပါရမီမရှိလျှင် ထာ၀ရဘုရားကိုမဖူးမမြင်ရ။(ဟေဗြဲ ၁၂း၁၄) ထိုနည်းတူစွာကျွနု်ပ်တို့အသက်တာသည်လည်းသန့်ရှင်းစွာအသက်ရှင်ဖို့လိုပါသည်။ မိတ်ဆွေ၌ရှိသောဒုစရိုက်အပြစ်များကိုနောင်တရလျှက် ၀န်ချတောင်းပန်၍ စွန့်ပစ်သော သူမူကားဂရုဏာတော်ကိုခံရလိမ့်မည်။(သုတ္တံ ၂၈း၁၃) ချစ်သောမိတ်ဆွေ ဘုရားသခင် ၏အံ့သြဘွယ်လက်တော်ကိုနှစ်သစ်မှာတွေ့မြင်လိုပါက အရက်၊ဆေးလိပ်၊ကွမ်းယာ၊
လောင်းကစား၊ မတရားသောမေထုန်ပြုခြင်း၊ သူတပါးအပေါ်အနိုင်အထက်ပြုခြင်းများ ကိုပယ်ရှားကြပါစို့။ (ဧဖက် ၄း၂၀-၂၅။ ၅း၃-၄)။ သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည် သန့်ရှင်းတော်မူသည်နည်းတူ၊ကျင့်ကြံပြုမူသမျှတို့၌ သန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလော့။ အကြောင်း မူကားငါသည်သန့်ရှင်းတော်မူသောကြောင့်သင်တို့သည်လည်းသန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလော့ ဟု ကျမ်းစာလာသတည်း။(၁ပေ ၁း၁၅-၁၆)
ချစ်စွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊.. နိဂုံးအနေဖြင့်မှာကြားပါရစေ၊ လူတွေကိုကြည့်ပါ၊ နှစ်သစ်ရောက်ပြီဆိုလျှင် အ၀တ်အစားအသစ်၊ နာရီအသစ်၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း အသစ်၊ ချမ်းသာသောသူများက ကားအသစ်၊အိမ်အသစ်၊အခြားဘာသာ၀င်ထဲမှ ချမ်းသာသူများမှာမူ နှစ်သစ်မှာအမျိုးမျိုးသော အသစရှာ်ကြပြန်သည်။ ဤသို့ဖြင့် အရာရာကို အသစ်၊အသစ်ဖြစ်အောင်ရှာဖွေ၀ယ်ယူသည်မှာ အပြစ်ဟူ၍မဆိုလိုပါ။ သို့သော် ယုံကြည်သူများအတွက် ဘုရားရှင်သည်ဘယ်အရာကိုအသစ်ဖြစ်စေချင်မည်နည်း၊ ဘယ်အရာကိုဘုရားရှင်သည် မိတ်ဆွေအားတောင်းဆိုမည်နည်း။ ငါ့သားသင့်နှလုံးကို ငါ့အားပေးလော့၊ (သုတ္တံ ၂၃း၂၆) မှန်ပေ၏၊ မိတ်ဆွေ၌ရှိသောကျောက်နှလုံးကိုထုတ်၍ဘုရားရှင်အားပေးပါကဘုရားရှင်သည်စိတ်နှလုံးအသစ်ကိုပေးမည်။ သေဘာအသစ္ကို သွင်းထားမည်။ သင်တို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲကကျောက်နှလုံးကိုနှုတ်၍အသားနှလုံးကိုပေးမည်၊ ငါ့၀ိညာဉ်ကိုသင်တို့အထဲသို့သွင်းပေးသဖြင့်သင်တို့သည်ငါ၏တရားလမ်းသို့လိုက်၍ငါစီ ရင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်လျှောက်ကြလိမ့်မည်။(ယေဇကျေလ ၃၆း၂၆)
ချစ်စွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊.. လူမည်သည်ကားခရစ်တော်၌ရှိလျှင် အသစ်ဖန်ဆင်း သောသတ္တဝါဖြစ်၏၊ ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခပ်သိမ်းသောအရာ တို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီ၊(၂ကော ၅း၁၇)၊ ထို့ကြောင့်ဤနှစ်သစ်မှာခရစ်တော်၌ရှိသောသတ္တာဝါအသစ်ဖြစ်လျှက်တခါမျှမလိုက်ဘူးသေးသော
နှစ်သစ်လမ်းခရီးကိုအသက်တာသန့်ရှင်းစွာ အသက်ရှင်၍ဘုရားသခင်နှင့်၄င်း၊ယုံကြည်သူများနှင့်၄င်း အတူတူမိတ်သဟာယဖွဲ့လျှက် တိုတောင်းသောအသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံတော်ဆက်ကပ်လျှင်သင့်ကိုစွန့်တော်မမူ၊ ပစ်ထားတော်မမူ၊မစိုးရိမ်နှင့်၊ယောရှုနှင့်က္ကသရေလလူမျိုးများဘုရားသခင်အံံ့သြဘွယ်ရာ လက်တော်တန်ခိုးဖြင့်ယောဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူး၍ခါနန်ပြည်ကို၀င်စားသကဲ့သို့ကျွနု်ပ်တို့ သည်လည်း(၂၀၁၆)နှစ်သစ်တစ်နှစ်ပါတ်လုံးအောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်လျှက်ကြွယ်၀
Rev.Dr.ပေါလ်ခေကျိုင်း ၏ဆောင်းပါး.... ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်....
Shwe Canaan TV: တခါမျှမလိုက်သေးသောလမ်း